Olee otú m pụrụ naghachi ehichapụ ozi foto si iPhone (iPhone 6 gụnyere)?
Dị ka m nwere ike ịgwa, ndị nkịtị ụzọ naghachi iPhone ozi foto a na-eji ndabere si iTunes. Ọ bụrụ na ị na-adịbeghị anya synced gị iPhone na iTunes, ị nwere ike họrọ iweghachi gị iPhone si ndabere site na nri ịpị ya na n'aka ekpe nke iTunes na-ahọpụta "Weghachi si ndabere". n'ebe ahụ bụ otu ihe ị chọrọ ntị bụ na gị niile iPhone ọdịnaya ga-ehichapu na dochie nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya, ma ọ dịkarịa ala, gị na-ehichapụ ozi foto abịa azụ. Ndị ọzọ ụzọ bụ kpọmkwem ike iṅomi na-agbake ozi foto si iPhone.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-gị iPhone ẹdude ọdịnaya na naghachi ozi foto si iPhone, e nwere ihe a ụzọ n'ezie. Ị mkpa a-atọ ndị ọzọ iPhone ozi foto mgbake ngwá ọrụ, na ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows).
The software nwekwara naputa ehichapụ ozi foto si iPhone site na iji gị iTunes ndabere faịlụ. Ihe dị iche bụ na ọ pụrụ inyere wepụ gị iTunes ndabere, ime ka ị hụchalụ na selectively naghachi iPhone ozi foto. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole. Ọzọkwa, ma nsụgharị-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5 / 5S / 4S / 4 / 3GS enweghị ndabere faịlụ.
Ọzọ, ka naghachi ozi foto si iPhone na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. wepụ iTunes ndabere maka iPhone ozi foto
Na-agba ọsọ usoro ihe omume mgbe wụnye ya na kọmputa gị. Naghachi iPhone ozi foto, mkpa ka ị họrọ a mgbake mode mbụ.
Mgbe niile ndabere faịlụ ga-akpaghị aka depụtara, ọ bụrụ na ị synced ihe karịrị otu ngwaọrụ na iTunes na gị Mac. Họrọ onye nke gị iPhone ebe ị furu efu gị ozi foto, na pịa "Malite iṅomi" nọgide na.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ehichapụ iPhone ozi foto
Mgbe mgbe, dum ọdịnaya nke ndabere ga-amịpụtara na egosipụta ka udi. N'ihi na gị iPhone ozi foto, ị nwere ike họrọ ka ịhụchalụ ọdịnaya nke "Ozi" udi. Họrọ ozi n'etiti, i nwere ike ịgụ niile nkọwa na n'akụkụ aka nri na window, gụnyere ederede, photos, videos, na ọbụna ọdịyo faịlụ. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" n'elu, ị nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS na ịrụ yiri iji weghachite gị ozi. Ugbu ma Windows na Mac ọrụ nwere ike iji ihe omume kpọmkwem iṅomi gị iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS na-agbake data site na ya ma ọ bụrụ na ị na-adịghị a ndabere.
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ Foto dị Ozi si iPhone